Ingabe Ungumxhumanisi Wezokuxhumana Ngempela Ngempela? | Martech Zone
Izolo ebusuku ngibe nethuba eliyisimanga lokuya kubo bobabili ukuhlangana ngilalele ophumelele kathathu i-Indianapolis 500 Helio Castroneves. Bengiyisimenywa somqeqeshi wokubamba iqhaza nokusebenza UDavid Gorsage, obuze ukuthi ngizohlinzeka ngezibuyekezo zezokuxhumana kuwo wonke umcimbi. Ngenkathi ngihlela ama-hashtag, ngilandela abaxhasi, futhi ngazi ama-VIP asekamelweni, uchwepheshe othile wezomjaho wathembela kuye wabuza:
Ungu ngempela umxhumanisi wezokuxhumana nabantu?
Indlela ayibuze ngayo yangibamba ngingazigcinanga… sengathi ubuza, yi into impela leyo? Okubi kakhulu ukusabela kwami. Ngangicasukile ngandlela-thile. Hhayi ukuthi wayezibuza ukuthi imithombo yezokuxhumana iyisiteshi esisebenzayo sokumaketha… nokuthi wayecabanga ukuthi ngingomunye wabo lezo abaxhumanisi bezokuxhumana nabantu. Ngamazisa ukuthi ngangiwumxhumanisi wezokumaketha onemvelaphi kwimidiya yomdabu neyedijithali, ngifisa ukwandisa imiphumela yezinkampani ze-B2B ne-SaaS.
Uxoxe ngodaba lokuthi inkampani yakhe yaqasha kanjani umxhumanisi wezokuxhumana eminyakeni embalwa eyedlule ngenxa yawo wonke amahemuhemu ayenzeka ezinkundleni zokuxhumana. Uthe lo muntu wenze umsebenzi oncomekayo ezinkundleni zokuxhumana, kepha empeleni lokho akuholelanga ezindlekweni zebhizinisi ezifanele. Uthe bagcine bemyekile lo muntu ngoba bazophatheka kabi ngesidingo sokuqinisekisa i-ROI ngale ndlela. Wazibuza ukuthi wake wakwenza yini lokho.
Bekufanele ngiqaphele ngempendulo yami. Ngiyakholelwa ekumaketheni imidiya yezenhlalo, kepha ngokweqiniso akunjalo my iya esiteshini lapho ngisebenza neklayenti kumasu okuthola - ukusesha kuyinto. Yize lokho kungenzeka kakhulu ngenxa yezimboni engisebenza nazo, futhi kuyindaba yokuthi umkhuba wami nobuchwepheshe bami buphi. Ngiyakuthanda ukwabelana nokuhlanganyela ngemithombo yezokuxhumana nsuku zonke, kepha angikubuki ngobuqotho njengesiteshi sokutholwa - ngisho nasenkampanini yami.
Lokho kusho, ngiyazi abeluleki abaningi bezokuxhumana zenhlalo abenza imikhankaso elinganisekayo, bakhulisa ukuqwashisa, futhi benze umsebenzi omuhle ekutholeni amakhasimende online. Ngikucacisile lokho kumnumzane ebengikhuluma naye - kepha angicabangi ukuthi kuyisixazululo kuwo wonke amabhizinisi. Ngicabanga ukuthi imithombo yezokuxhumana ingaletha inani enhlanganweni ngaphandle kokutholwa okuqondile futhi:
Ukuqapha umkhiqizo wakho kanye nabancintisana nabo ku-inthanethi ukukhomba izingqinamba namathuba ngaphakathi kwemboni yakho. Kunolwazi oluningi izinkampani ebezijwayele ukuqasha abalobi bezibalo ukuze bathole ukufinyelela kulo. Manje sekuvame ukutholakala kuzingxenyekazi eziningi zenhlalo. Siyathanda I-Agorapulse - engiyinxusa lalo lomkhiqizo.
Ukuphumelela Kwekhasimende kungenye amandla ezinkundla zokuxhumana. Uma uneqembu eliphendulayo, eliwusizo lokuphumelela kwamakhasimende elingathola izinqumo zabathengi abazoba khona nabakhona, imithombo yezokuxhumana ingaba isiteshi esihle sokwakha ukwethembana nokugcina amakhasimende ngokusebenzisa.
Ukuqwashisa Isu elinzima lokukala i-ROI, kepha kungumsebenzi omuhle wecebo eliqinile lezokuxhumana. Noma kunjalo, kungenye edinga ithalente. Ukwenza izwi lomkhiqizo wakho lizwakale futhi lisabalale phakathi kwabantu akulula, kepha kungabiza kakhulu. Ngesinye isikhathi, uma ukuncintisana kwakho kukuchoboza… udinga ukwazi ukukala ukuthi ngabe amathemba ayazi ukuthi ibhizinisi lakho liyindlela ongakhetha kuyo noma cha.
Trust kungenye inzuzo yezokuxhumana okunzima ukuyikala. Ngingahle ngifune online futhi ngithole umkhiqizo noma insizakalo engifisa ukuyithenga… kodwa-ke ngizodlulela eqenjini le-LinkedIn noma iqembu le-Facebook lochwepheshe ngibuze imibono yabo. Uma ngibona izinto eziningi ezingezinhle ngaphandle lapho, ngizoya enkambweni elandelayo. Ukuba nabalandeli abathandanayo ababelana ngethoni mayelana nokuthi inkampani yakho iku-inthanethi inkulu kangakanani kungahle kungabopheli kuphela isinqumo sokuthenga, kepha kungasiza.
Ngamazisa ukuthi, ngenkathi ngingeyena umxhumanisi wezokuxhumana ngokugcwele, angikaze ngiyishaye indiva imithombo yezokuxhumana nanoma yiliphi iklayenti. Ngangivame ukuhlanganisa amathuluzi wokushicilela ngokuzenzakalela nokwabelana ngolwazi lwekhwalithi online nezithameli, futhi ngakha izindlela zokuphendula izinkampani ezingaphendula kuzo. Ngikwenze lokhu ngoba bengingakwazi ukuthethelela izindleko zomuntu osebenza ngokugcwele kwezokuxhumana, kepha amaklayenti ami asabona okuhle okungavela ezinkundleni zokuxhumana.
Futhi, ngameluleka ukuthi inkampani yakhe kungenzeka ukuthi ayitholanga umxhumanisi ofanele ozobasiza. Ngicabanga ukuthi umxhumanisi omkhulu wezokuxhumana nabantu angazithethelela izindleko zalesi sixhobo… futhi uma bengakwazi, bazothembeka ngokuthi ingasetshenziswa kanjani ngaphandle kwezindleko zikachwepheshe ohlosiwe.
Emjahweni, lapho kunokuhlukana okuncane kakhulu phakathi kwabalandeli nabashayeli, ngicabanga ukuthi ukumaketha ezokuxhum kufanele ube nenzuzo nobufakazi be-ROI. Abalandeli bomjaho banobudlelwano nemikhiqizo exhasa abashayeli babo - ngokungafani nanoma yimuphi omunye umdlalo. Ukwabelana ngaleyo mikhiqizo ngemithombo yezokuxhumana, ngenkathi unikeza umnyango wangemuva wempilo yomshayeli kuyithuba elihle. Hlanganyela nabaxhasi bakho futhi ulinganise imikhuba yokuqwashisa neyokuthenga yabalandeli! Ngokukhuluma naye, bekungazwakali sengathi lokho bekugxilwe ngumxhumanisi wabo. Mhlawumbe ithuba elilahlekile.
Ngicabanga ukuthi ngashintsha umqondo wakhe ngalesi siteshi… futhi ngokwenza kanjalo, ngashintsha umbono wami ngaleli gama umxhumanisi wezokuxhumana kanjalo.
Tags: UkuthengaUkuqwashisaInsizakalo yekhasimendeimpumelelo yamakhasimendeukugcinwaRIOinsizakalo yamakhasimende omphakathiumxhumanisi wezokuxhumanaizinkundla zokuxhumana roi